Garlic prawns - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Hove13 maminitsi4 vanhu
kubudikidza Elena Calderon
Ichi ndicho chimwe chevatangi vatinoda zvakanyanya. Iyo ndeimwe yeyakagadziriswa paKisimusi uyezve iro rinosara regore, kunyanya kana tine vaenzi.
Izvo zvinogadzirwa mune imwe nguva uye chinhu chakakosha ndechekuzvidya sezvatinozviita nekuti zvinobva zvangorasa kupisa (patakatora pikicha iyi tanga tatodya hafu). Ndokusaka zvichikurudzirwa kuvashandira mukati hari dzevhu izvo zvinochengetedza kupisa kwenguva yakareba.
Ini zvishoma wedzera munyu, asi inyaya yekuravira. Kana tikashandisa mazaya echando, vadzivise kare, vadhonza uye woma nepepa rekicheni.
Kana uchizvifarira, pakupedzisira (mumasekondi ekupedzisira) unogona kuwedzera muto wehafu yemoni, kunyangwe ini pachangu ndichivada chete nemafuta, iyo garlic uye chilli.
Ivo zvakare akakodzera kukupa iwe chakakosha kubata kune yako pasta ndiro. Edza ivo neizvi manoodles kana mune izvi fusili recipe… Zvinoshamisa!
Usakanganwa kushandisa chilli kupa iyi dhishi chinhu chinonaka.
Kubika nguva: 13M
Nguva yakazara: 13M
70 g yemamwe maorivhi emhandara emafuta
5 clove yegariki
1 kana 2 cayenne kana chilli chunks
350-400 g yemaperezi akachekwa
1 / 2 supuni yemunyu
Isu tinodurura mafuta negariki mugirazi uye chirongwa 3 masekondi, kumhanya 5. Isu tinodzikisa, ine spatula, zvisaririra zvave zviri pamadziro uye muchivharo chegirazi chakananga kumasiwi.
Isu tinowedzera chilli uye chirongwa Maminitsi gumi, varoma tembiricha uye kapuni kumhanya, isina beaker kuitira kuti ive inoputika zvirinani.
Wedzera machena akachekwa, akambosaswa nemunyu uye chirongwa 3 maminetsi, varoma tembiricha uye kapuni kumhanya, pasina kuisa beaker.
Isu tinobvisa kubva mugirazi uye tinoshumira nekukasira.
Mamwe mashoko - Noodles negariki, mucheche eels uye prawns / Fusili ine zucchini uye prawns
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Zvinokanganisa, Celiac, Nyore, Lactose isingashiviriri, Zai risingashiviriri, Asingasvike maminetsi gumi nemashanu, Navidad, Hove, Nguva dzose
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Hove » Shrimp Scampi
Maria Theresa akadaro
Iniwo ndinozviita, zvinonaka ……………….
Pindura Mª Teresa
Elena Calderon akadaro
Ichokwadi, Mª. Teresa. Izvo zvinoitwa munguva pfupi uye zvakakwana. Shuwiro yakanakisa.
Pindura kuna Elena Calderón
Uye kune iyo yekare thermomix? Chii chiri kumhanya? Zvirinani nefly butterfly? Ndatenda
Mhoro Maria, kune makumi maviri nemaviri iwe unofanirwa kuisa shavishavi pane mashizha uye vel. 21. Kwaziso.
Ini ndinoda garandi prawns. Super yakanaka foto !!
Nei resipi yemichero uye pasita saladhi isina kuburitswa? Panofanirwa kunge paine kukanganisa.
Ndatenda maresipi ako, iwo akanaka.
Mhoro Delfi, ndinozviona pasina matambudziko. Unogona kuzviona kare? Kwaziso uye ndinofara kwazvo kuti iwe unofarira yedu blog.
Mhoro !!, ndichavaita izvozvi ...
Mumwe mubvunzo, iwo anogona kunge akaomeswa nechando kamwe akagadzirwa?
Mhoro Monica, ini handina kuyedza kuvamisa, handizive kuti oiri ichave sei. Ndinovimba unovada. Shuwiro yakanakisa.
Ndakazviita svondo rapfuura kumba uye ndakabudirira zvachose. Hwema hwakabuda ndokupinda mumugwagwa.
Ndinoda kukutendai nezvakanaka uye zvakapusa mapiro. Ndakagadzirawo coca yemuriwo kushamwari dzangu uye yummy.
Ndiri kufara kuti wakavafarira, Estrella! Kwazisai uye ndinokutendai zvikuru nekutiona.
Ndakagadzira ma prawn uye ainaka
Ndiri kufara kwazvo, Carmen!
m jose akadaro
Dzinogona kugadzirwa nemaprawzi akaomeswa nechando.Ndatenda ndinofungidzira kuti anove anonaka senge ese mabikirwo
Pindura am joseph
sandra mc akadaro
Mhoroi, ndangosvika pablog rako uye ndakatorwa moyo…. !!! Ndezvekuti ini ndakave neiyo thermomix kwevhiki uye ndiri kufara kwazvo nazvo… Ndine zvakawanda zvekubika zvandinoda kugadzira zvekuti handizive pekutangira. Iyo prawns inotaridzika chaizvo, ndichavaitawo heh heh.
Ndiri kutsvaga kugadzira crepes uye handisi kuiwana ... Ungandiudza kwandingaiwane? Mazvita… .nemanyorero ese anonaka.
Pindura kuna sandra mc
Sandra, ndine crepes yakaitwa kubva kumavhiki mashoma apfuura asi handisati ndatumira karesipi parizvino. Ini ndichaedza kuzvitumira mumazuva mashoma.
Mhoro Silvia, ndingafarire kwazvo ... vasikana vangu ndinovada uye ingave iri nzira ine hutano yekuvafadza.
Ndatenda uye ndichave ndinoteerera ...
Isabel Maria Bermudez akadaro
Kutenda bhurogu yako, inguva yekutanga kuti ndipinde uye ndinoiona ichinakidza. Kutsvoda
Pindura kuna Isabel Mª Bermúdez
Zvinogona kugadzirwa uyezve kudziyirwa kudya zuva rinotevera?
Merche, ndinofunga pasina dambudziko ... Chero bedzi iwe uchizviita uye zvinangwa zvakatonhora mufiriji
Mhoroi, ini ndakavaita chando asi ivo vanobuda zvishoma mvura, asi yakanaka
Pindura kune incarni
Izvo zvinogara zvichiitika neavo vakaomeswa nechando, ndosaka uchifanirwa kuti uvarege vachinyura uye vorere kwemaawa mazhinji.
Mhoro!!!! Izvo zvakanaka zvavakabuda, nyasha zhinji, hongu, ndaisa kutendeuka kuruboshwe kuti varege kundipwanya !!! kutsvoda
MMM inotaridzika zvakanaka, ndinovagadzira nenzira yakafanana, ini ndinoda ma prawns :).
Aya ma prawn anonaka! Izvo zvakashata ... uye chingwa ichocho chakanyikwa mumafuta ...
Mhoro Leonor, kuve spuni yekumhanyisa haina basa. Asi hazvimborwadzi kuitendeukira kuruboshwe. Rombo!
Nhasi ndagadzira iyi resipi uye zvabuda mushe ... asi ndinofanira kutaura kuti mapuru anongoita mbishi zvishoma, ndinoisiya kweminiti zvakareba. Mbambaira dzainge dzakagwamba nechando asi dzakanyungudutswa zvisati zvaitika. Ndakatadzei? Ndatenda
Hi Sara, pamwe kunyange kana vachiita sevakanyunguduka kunze, zvinogona kunge kuti mukati mavo maive muchando. Prawn chigadzirwa chisina kusimba icho chine nguva shoma yekubika chakaringana. Pamwe kuvarega vazorore kweminiti imwe mukati megirazi, asi muchina wakadzimwa, zvinogona kukwana. Zvinoenderana nehukuru hweshrimp, nekuti kune iwo kubva kudiki kusvika kuXL ... Nguva inotevera ini ndinokurudzira kuti kana nguva yapfuura, siya 1 min yekuzorora uye uvhure shrimp kuti uone kana yakabikwa mukati.
Chimwe chidimbu chiri kudzikira: tinofanirwa kurerutsa chigadzirwa maawa makumi maviri nemana tisati tachibika uye mukati mefiriji munzvimbo inogona kuwedzerwa mvura yakawandisa. Wobva waomesa zvakanaka nemapepa anopinza kuti ubvise mvura yakawandisa uye nekudaro ubike zviri nani.
Iwe uchandiudza sei nezve inotevera nguva! Kumbundira nekutenda nekutinyora.
Mhoroi masikati akanaka, Goredzva Rakanaka. Ukaisa machena mumukanwa, haucheuki kuruboshwe, ndinongoda kuzviita zvekupera kwegore uye ndinotya kuti hazvifambe zvakanaka. Ndiko kuti mhuri yezvematongerwo enyika iri kuuya.
Mhoro Laly! Ini ndaizoisa iyo yekuruboshwe kutendeuka pairi, kungoitira. Ivo zvechokwadi vanobuda zvakanaka kwauri. Nhanho yakanaka nedare rekudya! Iwe uchaona kuti iwe unobudirira sei! Kumbundira uye kufara gore idzva!
Ndatenda nekundipindura nekukurumidza. Makore Makanaka Anofara Evha uye Gore Idzva Rakanaka.
Wakanganwa kuisa kona yekuruboshwe. Ndakazviita ndisina kutendeukira kuruboshwe uye kwanga kune akawanda akachekwa-akachekwa machena.
Iyo yekumhanyisa chipunu haina simba rakawanda rekucheka asi mupiro wako wakanaka kwazvo !!
Mhoro!! Kuzviita ne tm5, ndiko kumhanya uye nguva zvakafanana?
Mhoro Angeles, mudanho 2 chirongwa maminetsi masere, tembiricha 8 ° uye mudanho rechitatu seta tembiricha 120 °. Nhanho yacho yakafanana. Kusveta !!
Ndakaisa reverse turn nekuti yakandipa kuti iyo prawns inogona kupwanywa….
Mutsva peach keke
Sandy ice cream kubva kuMcDonald's